Umhla My Pet » Indlela Ukutsalela Nomfazi zamaphupha zakho
ukubuyekezwa: Jan. 15 2020 | 5 min ukufunda
Mna ndingumfazi, umfazi ke imihla emininzi kunye nabantu, emva ngemihla yam ukuthandana. Ngoko wabona eninzi izimo ezahlukileyo, iingcinga iindlela ukuthandana. Ndiza ukwabelana nani le ukuziphaka ngaphakathi malunga ngokwenene into isebenza amadoda ukuthandana abafazi, kwaye kananjalo oko ukuphepha isibetho xa wena phaya ngomhla okanye ukunxibelelana umfazi.
Qinisekisa Ni Ezi aBakhi Attraction
Romance yakhe – Thina bafazi babe nomdla indoda ngokuthi bangaziva enxulumene, oku ingahluka kancinci kuyo isebenza njani abantu abaninzi ndiyakholwa. Ngoko nohlangatyezwa ngumntu kwaye uziva onke umdla, Kodwa emva kokuchitha ixesha naye uya sizuze ngapha kuwa ngokupheleleyo kuye. Oku kwenzeka ngalo lonke ixesha. Ngoko ukusebenzisa le. Romance yakhe. Musa ukuzikhathaza zibonakala endala lixesha – Andazi yomfazi abangatshatanga ayiyi kuziva ezimangalisayo xa umntu ethatha ngenyameko niyathandana naye. Uya qaphela iinzame chatha usiya, iintyatyambo, itsala umva situlo, ukufumana umnyango njalo njalo. Nokuba, xa intloko yakhe ukholelwa ukuba mdala lixesha, entliziyweni yakhe iya kunyibilika nje, kwaye ukuba nalapho kubalulekile ukuba ube nefuthe!
Ukuhambisa ukuhlawula - ngokwenene Oku edibana kunye ngasentla. Nantoni hang-ups onayo ngokuhlawula Mna ndicebisa ukuba ukuwaphosa kwaye ngonyawo oyilwayo ukuba ufuna ukuba babe nesimilo esihle. Ngaba uyafuna ukwazi ngoba? Funda inqaku wam ngubani kufuneka ahlawule ngomhla wokuqala.
ukuncoma yakhe (kodwa kakhulu) - elincinci, ukumncoma lokwenene, ihamba indlela ende kakhulu ekwenzeni umfazi bazive kakuhle, kwaye kunyibilika nokuba intliziyo yakhe yabanda. Kodwa mabalumkele ukwenza ngaphezu-it. Uyakwazi ekulula engakhuselekanga ukuba onke amanye ilizwi emlonyeni wakho nokumncoma.
Sebenzisa Kwakumnandi ukuze akhululeke - Ukuthandana inokuba ngamava langoku ngelixa wena ukwazi ukuze akhululeke ngokucwangcisa into izandla and fun, kunokuba ukugogeka bayizalisa umhla bar okanye isidlo leyo kuthi zinokufana ndlebe umsebenzi! Hambani apha: izimvo ukuthandana elilodwa ezinye iingcamango kakhulu kwaye ufunde apha: baceba ukuba umhla wokuqala emangalisayo ukufumanisa ukwakha uxhulumaniso.
Yakha uxinezeleko - isakhiwo iingxwabangxwaba kunye nokunyuka ngokwesondo ungasoloko kwaye namacebo eziye kudala isetyenziswa ngabantu ukwandisa umtsalane umfazi Bafana kuvavanywa. Oku akuthethi ukuba ube lwezinambuzane ngesondo, kunjalo isuntswana yokonwabela, ngothando playful unako izinto ashushu ngokwenene ukuya. Ndimyeke yenye indlela kakhulu ukwakha chemistry ngokwesondo nje ke ngabaxwa. Ndakha yomhla ukugonwa owasebenzisa oku indlela yakhe iphambili ukusebenzisana umfazi. Ekuqaleni isithukuthezi, kodwa emva kweyure okanye ezimbini oko yazicacela sisebenzise. ngokunjalo, njengenxalenye yokwakha kukuxabana kukugcina ubomi bakho kwaye nokuzimela, nokuba uwe kumfazi.
Kuphephe ezi mpazamo Ukuthandana
Ukuba Whiney - Abantu zitswina ngokugqithiseleyo zinto banjalo off. nzulu. Ndiqinisekile ukuba uyakwazi oko xa umntu omaziyo iyalila lonke ixesha. Mhlawumbi ucinga ukuba asinguwe, nokuba, khangela nje koko. Ngamanye amaxesha dumzela zitswina ngaphandle bengakuqondi oko. Ngaba ungathanda ukukhalaza banamaqabane zakho? Ngaba bayancwina malunga: yimo YEZULU, umsebenzi wakho, imeko yezoqoqosho, abafazi ukuba umhla? Amathuba xa uyenza nabahlobo bakho ngoko kuyenza xa uthandana, yaye oko kunokuba yingozi wabeka umfazi kude. Kuqaphela oko uthetha ngako ngemihla yakho, kwaye ulwimi usebenzisa.
Ukubonisa ukungakhuseleki ezinkulu - Kulungile ke sonke siya kuba ezinye sinedyudyu, kwaye andiyi enye Mna ebhotileni up imvakalelo, ke ngomhla wokuqala na indawo uveze ukungakhuseleki yakho malunga umdla wesini esahlukileyo, nokuba, kuba mna kuni, inene, ukuba uya kuba nawe ukuba uthe wenza! Umfazi elingumnqakathi usenokukufumanisa oluthandekayo ke ukuba kwakuza kubakho liqaqobana enzulu. Kuba uninzi lwabasetyhini oku kuya kusenza nabandayo. Ndakha yomhla ukugonwa owaqalisa bendibuza ukuba Ndandicinga ukuba nomtsalane ngomhla wokuqala, kunye nendlela akazange wandibonisa oko evela kwindawo sokungakhuseleki. Akayi umyeke. Yaye waqhubeka ecela kum, ndi fu kuye enomtsalane? Waza waqalisa ukuthetha kwakungekho ukuthandana ingongoma ukuba andizange engamfumani enomtsalane ibe wavuka kakhulu funny ngayo. Inyaniso Ndathi ekwenzeni engqondweni yam ukuba ndaziva (khumbula umtsalane Isebenza ngokwahlukileyo thina bafazi) Kodwa ngokuhamba kwexesha ngalinye wakukhankanya phantsi umtsalane bam baya. Ngempumelelo wathetha wayesela okufumana omnye umhla. Ubale imiba lwakho unyango, okanye ekhaya ngokwakho, hayi kwimihla yakho. Kananjalo qaphela - sinedyudyu neemvakalelo ezahlukeneyo!
Bitching malunga ex yakho - Oku kum yenye zaphuli kwaye uya singazikhululi ou ikhawuleze ngaphezu linyibilike itshokolethi ngemini eshushu. Kulungile, Ngoko kusenokwenzeka ukuba ex yakho ibe inkulu b * ch ehlabathini lonke, kwaye lukwenza abantliziyo nabantwana abahlanu ukuba bayinyuse, kodwa umfazi ukuba uthandana akazi ukuba kanti. Ukuba uqala kakubi mouthing ex yakho yena kubalisa ngakumbi ex akho, kunokuba kuwe. Kananjalo yena liya kuxhalela imigwebo uya kwenza ntoni ngaye. Ngokuhambisa ex yakhe ekuqaleni ukuthandana emabi nje kwaye ezingeyomfuneko ngokupheleleyo (enyanisweni ukwenza ityala kuba engade ex kukaThixo kulwalamano lwakho kuze!) Into nina NGOKU, kunye lady phambi kwakho.
Ukuba ups hang ezinkulu (ezi zibonakale hoyi kuthi!) - Jonga zonke ngasentla. Hang ups Kwakhona aquka yaviwa malunga imihla eyoyikekayo ukuba abe phezu, ukhalazela ukuba akukho ukubize kuba ikwenza uzive uyaxhalaba, slagging yonke imihla uye kwi, ukuncwina noncwino malunga ngokuhlawula oyilwayo etc. Lixesha lokuba iblukhwe zakho ezinkulu inkwenkwe kwi. Ngamanye amaxesha ubomi ungabona olungafanelekanga, kodwa ukuba ufuna ukuba phambili umdlalo ukuthandana ngamanye amaxesha kufuneka nje ukuba uyifince phezulu! Kungenjalo uya siti nje switi zakho. Ndiyathemba ukuba ukhetha phaya phandle, ehlise hang-ups uvuye ukuthandana kuba indonwabisa, akucingeleki, kwaye ngamanye amaxesha namava crazy kunokuba.
Yaye ekupheleni ...
Ungayilibali yonke ngasentla kwaye uzibonakalise! - Ewe ngenene akazange athi. Ekufundeni nasekulandeni uluhlu zikhokelo azingekhe amaxesha kukwenza abantamo kunye nemvelo ngemihla yakho. Ngoko ke nangona kakhulu ukufunda iingcebiso lokucingisisa ivumele ukutshona kwalo, musa ukuzikhathaza ngokufumana ngayo ogqibeleleyo. Thabatha zonke iingcebiso ndithandana njengesikhokelo kunokuba umele uzi-. Zama izinto kuba wena ngaphezu onke khumbula ukuba baphumle nje kwaye wonwabe!
Indlela Umhla – Old School Style